Hawaasni Oromoo Qaama Ummata Minnesotatti - OPride.com
Hawaasni Oromoo qaama ummata Minnesota kan gahee jabaa qabu. Gumaata isin godina keenyaaf godhaa jirtan hedduun dinqisiifadha.
Akka bulchaa godina kanaatitti, Hawaasa Oromoo waliin tumsa uumuudhaan, dhimmaa baqattoottaa dabalatee, rakkoolee hawaasa kana mudataa jiran furuudhaaf jabinaanin carraaqa. Adeemsi Maatii Oromoo sababa baqaatin Afrikaa fi Amerikaatti addan cite jiru walitti fiduu akka saffisu karoorfadheetin jira.
Karoora kana galmaan ga’uufis hogganoota Mana Marii Ameerikaatti Minnesota bakka bu’an waliinin dalaga. Bakka bu’oota kanneen waliin tahuunis, iyyannaan baqattoonni hayyama jireenyaatifi lammummaa Ameerikaa argachuuf galfatan waajjiraalee federalaatitti akka lafarra hin harkifanne ni too’anna.
Rakkoolee gaaga’mni diinagde fide tanarra aanuudhaaf, lammiileen hundi ogummaa hiree hojiitif dorgomuuf isaan dandeessiftu horachuu qabu. Kanaaf ammoo leenjiin kaffaltii malee mootummaadhaan akka kennamu haalli ni mijaa’a. Hiree hojii Minnesotatti argamtu daran bal’isuudhaaf, boondii mootummaa guddaan ni baha. Teeknolojii human tirikaa haraya hojiirra oolchudhaanis, horiin garasiin qisaafamu ni qusanna. Hala kanaan hojjattoota kuma kurnanniin lakkaawamaniif hireen dalagaa haarayni ni uumamti.
Tarkaanfileen arman olitti eeraman kun miseensonni hawaasa Oromoo hojii gaarii akka argatan ni gargaaru. Haa ta’uutii hiree hojii tana caalatti tasgabbeessuuf, qulqullina barnoota godina keenyaattif xiyyeeffannaan haarayni kennamuu qaba. Barnoota daa’immaaniiti eegale, sirna Manneen Barnoota Ummataa jajjabeessuun barbaachisaadha. Dabalataanis, ilmaan Minnesota barnoota sadarkaa lammataa xumuran cufti haala koolleejjii keessattiifi dirree hojiititti milkaa’uuf isaan dandeessisuun qophaa’uu qaban.
Hiree ijoollee hundaa fiixaan gahuudhaaf, qabeenyi fi meeshaaleen manneen barnootaatiif barbaachisu cufti akka guutamuuf halkaniifi guyyaan tattaafadha. Mataa kiyya dabalatee hogganoonni sirna barnootaa hundi dalagaa bu’aadhaan mudaalamu agarsiisuudhaaf dirqama fudhanna.
Dhumarratti, tajaajila hanga ammaa Hawaasa Oromootif kennaa ture itti fufuudhaaf hawwiin koo guddaadha. Deeggarsa keessanifi kan hawaasa birootin Minnesota dagaagdeefi misoomte akka jaarru shakkii hin qabu.
Oduu Wal-fakkaata :
I will form Partnership with Oromo Community – Mark Dayton
Oromo Americans Find a Voice in US Elections – OPride.com
Seenaa Gabaabaa Haaji Muhaammad Sh. Kadiir